‘अहिले सडकमा देखिएको असन्तुष्टि सामान्य होइन’ – Enepali News
‘अहिले सडकमा देखिएको असन्तुष्टि सामान्य होइन’
June 12, 2020 260
काठमाडौँ — कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँगै यसमा भएको खर्चलाई लिएर नागरिकस्तरमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । यसैको फलस्वरुप केही दिनयता उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरुमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । तर, सरकारले यसलाई कोरोनामा राजनीति मिसियो भनेर टिप्पणी गरेको छ । आन्दोलनको अवस्था किन आयो र सरकारसँग अबको विकल्प के हुन सक्छ ? यिनै विषयमा राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी ।
लकडाउनकै बीच अचानक सडकमा प्रर्दशन हुन थाले, यसले के संकेत गर्छ ?
सरकारको कामलाई लिएर नागरिकहरु असन्तुष्ट छन् भन्ने देखिन्छ । युवाहरु अहिले सडकमा देखिएका छन् । उनीहरुका माग धेरै पनि छैनन् । पीसीआर टेस्ट बढाउनु पर्‍यो भनेका छन् । खर्चको हिसाब देखाउ भन्नेजस्ता जायज माग राखेको देखिन्छ । यी माग ती युवाहरुका मात्रै हुन् जस्तो लाग्दैन । धेरै नेपालीको माग हो । सडकमा कुनै पार्टीको झण्डा देखिएको छैन । नेपाली झण्डा देखिन्छ । स्वतस्फुर्तरुपमा यूवाहरु आएको देखिन्छ । यसको मतलब सरकारले जुन ढंगले कोरोना भाइरस संक्रमणको व्यवस्थापन गर्दै छ, त्यो व्यवस्थापनको ढंगमा नेपाली नागरिकहरुको असन्तुष्टि छ भन्ने हुन्छ ।
कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको व्यानर बिनै देशभर प्रदर्शनहरु भइरहेका छन्, यो कसरी सम्भव भयो ?
ठ्याक्कै कसरी सम्भव भयो भन्न सकिन्न । सायद सामाजिक सञ्जालबाट सम्भव भयो कि ! तर, त्यहाँको प्रकृति हेर्दा मानिसहरु स्वतस्फुर्तरुपमा आएको देखिन्छ । कसैको आयोजना पनि देखिँदैन । यस्तो प्रदर्शन एक ठाउँमा मात्रै भएको छैन, धेरै ठाउँमा भएको छ । यो भनेको मानिसहरुमा असन्तोष बढ्न थाल्यो भन्ने नै हो । यदि पार्टीहरुले उठाएका माग हुन् भने पनि बेठिक छैनन् । पीसीआर टेस्ट गर भन्ने सबैको माग हो, जायज माग नै हो । अहिले जुन ढंगले प्रदर्शन भएका छन्, यसलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । यो साधारण हो, सडकको घटना हो, त्यहाँ पानीको फोहरा हालिदिए हुन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । यो साधारण घटना होइन ।
अस्तव्यस्त तरिकाले क्वारेन्टाइनहरुमा मान्छे राखिएको छ । जोगिनका लागि मान्छे क्वारेन्टाइनमा बस्ने हो, त्यही क्वारेन्टाइनले संक्रमण फैलिएको छ । सीमामा आउने मान्छेहरु व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । लकडाउन मात्रै लम्बाउने तर विकल्प नदिने गर्दा पनि आक्रोश पैदा भएको होला !
राजनीतिक दल छन्, संसद छ, चर्चा भैरहेको छ । तर, सडकमा उपचार, पारदर्शीताजस्ता माग उठेका छन्, यस्तो अबस्था किन आए होला ?
सरकारले व्यवस्थित तरिकाले काम नगरे यस्तो अवस्था आएको हो । सरकारले हिसाबकिताब देखाउनुपर्छ । महालेखा परीक्षकले जाँच गरिहाल्छ । तत्कालको लागि १० अर्बको हिसाबकिताब हो । १० अर्ब यहाँ यहाँ खर्च भयो भन्न सरकारलाई के गाह्रो छ । सबैतिर अस्तव्यस्त देखिन्छ, १० अर्ब कहाँ खर्च भयो भन्ने जस्तो परेको हो । अलिअलि पूर्वाधार जोड्न होला खर्च, टेस्ट पनि महंगो नै छ त्यहाँ पनि गए होला । तर जे जेमा गएको छ त्यो यहाँ गयो भन्नलाई कठिन होइन ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यङ्ग्य किन हान्नु पर्ने ? व्यङ्ग्य हान्नुपर्ने विषयवस्तु त हैन नि यो । एक-एक गरेर हिसाब देखाउँछौं, संसदमा सार्वजनिक लेखा समितिले नै हेर्न सक्छ हिसाब भन्दिए भै हाल्थ्यो नि । जति लुकाउन खोज्यो त्यति असन्तुष्टि बढ्छ । पक्कै दाल मे कुछ काला हे भन्ने हुन्छ । लुकाउन खोजेर नागरिकको आशंका बढेको हो ।
सरकारले उनीहरुलाई कसरी विश्वासमा ल्याउन सक्छ ?
विश्वासमा ल्याउने भनेको तीन वटा काम गरेर । एउटा, जहाँ जहाँ संक्रमण बढी फैलिएको छ त्यहाँ सरकारको व्यवस्थापन पुगेको हुनुपर्‍यो । न त प्रदेश सरकारलाई विश्वास गरेको देखिन्छ न त स्थानीय सरकारलाई । पैसा त्यहाँ पठाएको देखिँदैन । सबै पैसा गुटमुटाएर केन्द्रमा बसिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, स्रोत सम्पन्न पनि बनाउने । जसले केन्द्र सरकारको बोझ घट्छ । तलबाट काम सुरु हुन्छ ।
दोस्रो, परीक्षण बढाउन पर्‍यो । नेपालको बुताले कति भ्याउन सक्छ त्यतिमात्रामा । तेस्रो, संक्रमित बिरामीहरु राख्न अस्पतालहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । अस्थायी अस्पताल बनाउन सकिन्छ । चीनको अनुभव हामीसँग छ । अरु देशको पनि अनुभव पनि छ । क्वारेन्टाइनमै मान्छे मर्ने, त्यहीं संक्रमित हुने अहिलेको स्थितिलाई सरकारले तत्काल व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो ।
मन्त्रीहरुले नै देशमा कोरोनामा राजनीति मिसियो भनेका छन्, किन होला ?
राजनीति त मिसिइहाल्छ नि ! सरकारले कमजोरी गरेपछि राजनीति मिसिँदैन त ? राजनीति गर्ने ठाउँ त सरकारले दिएको छ । अनि विपक्षीले छोड्छ ? सरकारमा बसेकाले कुनै भूल गर्छ भने विपक्षीले त्यो भूललाई राजनीतिकरण गरिहाल्छ नि ! सिस्टम नै त्यस्तो खालको छ, पक्ष- विपक्षवाला । पक्षले कुनै भूल गर्यो भने विपक्षले भूललाई प्रश्न उठाउँछ । सबै कुरा राजनीति हो ।
Prev२७५ क्षमता भएको नेपाल एयरलाइन्स जापानबाट ६ जना मात्र यात्रु टिपेर फर्कँदै
Nextरुकुम घटना बन्यो झन् रहस्यमय, भयो नयाँ खुलासा ! शवहरु त खरानी भए तर अहिले भेटिए यस्ता प्रमाण !